Windows အတွက် iCloud၊ သင်သိထားသင့်သမျှ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iCloud Windows အတွက်သိထားသင့်သမျှ
Ignacio Sala | | iCloud
iCloud စတင်ပြီးကတည်းက Apple ၏ cloud သိုလှောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုသည်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များထပ်မံတိုးချဲ့လာသည်။ iOS 10 ကိုလွှတ်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple သိုလှောင်မှုဝန်ဆောင်မှု, ကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းရန် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်ခဲယဉ်းသည်။
iCloud ကို iOS, macOS တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းမှာ Mac ရှိတယ် ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုအပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့။ Apple ကဒါကိုသတိထားမိတယ် Windows အတွက် iCloud.
1 Windows အတွက် iCloud ကို download လုပ်ပါ
2 Windows အတွက် iCloud ကိုပြင်ဆင်ပါ
2.1 iCloud Drive ကဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ။
2.2.1 ICloud ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်
2.2.2 streaming ၌ငါ့ဓာတ်ပုံများ
2.2.5 ဓါတ်ပုံများသည် iCloud တွင်မျှဝေသည်
2.3 မေးလ်၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များနှင့်အလုပ်များကကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာကိုကမ်းလှမ်းသနည်း။
2.4 Bookmarks ကဘာကိုကမ်းလှမ်းသလဲ။
3 Windows အတွက် iCloud မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
Windows အတွက် iCloud ကို download လုပ်ပါ
ဤဆောင်းပါး၌ရှင်းပြပါမည် ၀ င်းဒိုးအတွက် iCloud ဆော့ဝဲလ်မှပေးသောရွေးချယ်မှုအားလုံး။ အကယ်၍ iTunes ကိုသင်အသုံးပြုလျှင်၊ iOS ပေါ်တွင်အခြေပြုသည့် Apple စက်တစ်ခုရှိပါက၊ iCloud ကိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အခိုင်အမာဆိုလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် iTunes မှပေးထားသောအားသာချက်များကိုစတင်ခံစားရန်ဤ platform ၌အသစ်ဖြစ်နေလျှင်၊ အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။ Windows အတွက် iCloud ကို download လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ Apple ဆော့ဖ်ဝဲသည်စနစ်ထဲသို့ပေါင်းစည်း။ စတင်အလုပ်လုပ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုလိမ့်မည်။ iCloud သည် system စတင်သောအခါစတင်သော element များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iCloud အကောင့်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းလိမ့်မည်သင်၏ Apple ID ကိုသင်၏စကားဝှက်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရေးထည့်ရမည်နည်း။
လျှောက်လွှာအောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ PC များနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည့်ဒေတာအားလုံးကိုပြလိမ့်မည် ယုတ္တိနည်းအရ iOS ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့မဟုတ် Mac ပေါ်တွင်အသုံးပြုနေပြီးဖြစ်သော ၀ င်းဒိုးတွင်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းအားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောလည်ပတ်မှုစနစ်နှစ်ခုတွင်တူညီသောဒေတာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောလည်ပတ်ရေးစနစ်မည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအားလုံးအချိန်နှင့်အမျှရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အပေါ်ကပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း Apple ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကို iCloud Drive တွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်; ဆက်စပ်သောအရာအားလုံး ဓာတ်ပုံများ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းကိရိယာတွင်ပြုလုပ်သည် (iCloud Photo Library, ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံများ streaming၊ iCloud တွင်မျှဝေထားသောဓာတ်ပုံများအပြင်ဗွီဒီယိုအသစ်များနှင့်ဓာတ်ပုံအသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့သို့ တင်၍ တင်ခြင်း); က Outlook နှင့် Safari Bookmarks များဖြင့်အီးမေးလ်များ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များနှင့်အလုပ်များ Internet Explorer နှင့်အတူ။
ဒါပေမယ့်အပြင်, ငါတို့သည်လည်းနိုင်ပါတယ် iCloud ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အာကာသ၏သိုလှောင်မှုဖြန့်ဖြူးမှုကိုစီမံသည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်နေရာကိုအသုံးပြုသောဖိုင်များသို့မဟုတ်အရန်ကူးမိတ္တူများကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုခြင်း။
Windows အတွက် iCloud ကိုပြင်ဆင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ iCloud အကောင့်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း application သည်ကျွန်ုပ်တို့ PC နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာအားလုံးကိုပေးထားသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်မှုလေးခုသည်နောက်အဆင့်တွင်သူတို့ကိုပြုပြင်ရန်မှတ်သားထားပုံပေါ်သည်။ iCloud ဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ Bookmarks များ၊ မေးလ်များ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့မွေ့လျော်လိုပါကသက်ဆိုင်ရာ tab ကိုအမှန်ခြစ်ပေးရမည်။ ဒီကိစ္စမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည် option ကို check လုပ်ထားထားခဲ့ပါသွားကြသည် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီမှကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်မှုများသည်အလွန်အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။
iCloud Drive ကဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း iCloud ကိုယခုခဏမျှအသုံးပြုပါလိမ့်မည် ဘုံသိုလှောင်မှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လာသည်၎င်း၏နေဆဲကန့်သတ်ရှိပါတယ်ပေမယ့်။ အကယ်၍ ဒီ tab ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ Mac မှလက်ရှိလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows PC မှဖိုင်တွဲများ (ဖိုင်တွဲများဖြင့်ခွဲခြားထားသော) စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးရယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒီရွေးချယ်မှုကိုဖွင့်ခြင်းက Apple ID နှင့်အတူသက်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းအားလုံး၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီရွေးချယ်မှုကကွန်ပျူတာကိုဖွင့်တိုင်း၊ Apple ID နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိရိယာအားလုံးမှလတ်တလောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျှောက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ iCloud အကောင့်သို့ဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုများအားလုံးကို directory ထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ iCloud \_ Uploads၊ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုသို့ပြောင်းနိုင်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံများသည် iCloud တွင်မျှဝေသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows PC မှအခြားလူများနှင့်မျှဝေခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာသုံးခုတွင် upload နှင့် download directory ကိုဖိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မေးလ်၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များနှင့်အလုပ်များကကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာကိုကမ်းလှမ်းသနည်း။
Outlook နှင့် iCloud မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows PC တွင်ရှိသောအဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ အလုပ်များနှင့်အီးမေးလ်များကိုတိုက်ရိုက်ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်မှအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ အီးမေးလ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များနှင့်အလုပ်များအတွက်လည်းအလားတူပင်။
Apple Safari browser သည် Windows အတွက်၎င်း၏ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သောအဆိုးဆုံး browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ Apple သည် iCloud မှတဆင့်၎င်းကိုသတိထားမိပုံရသည် Bookmarks များကို Internet Explorer browser နှင့်သာထပ်တူပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူပြုလိုသည့်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုရွေးပြီးပါက Apply ကိုနှိပ်ပါ။ ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားပြတင်းပေါက်တစ်ခုပြလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိမ့်မည် iCloud အမှတ်အသားများကိုပေါင်းစည်းသည် Internet Explorer ထဲရှိသူများနှင့်အတူ။ အခြားရွေးချယ်မှုသည်ပယ်ဖျက်ရန်ဖြစ်သောကြောင့် Merge ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုမှာမေးလ်၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များနှင့်အလုပ်များ၏အလှည့်ဖြစ်သည်။ Windows အတွက် iCloud အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ အလုပ်များနှင့်အီးမေးလ်များအားလုံးကိုစတင်စတင်ပါလိမ့်မည် Outlook ထဲသို့အလိုအလျောက်ပေါင်းစပ်ရန်ဤအကောင့်များ၏။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါက OK ကိုနှိပ်ပါလိမ့်မည်။
Windows အတွက် iCloud မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်၎င်းသည်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးပြီကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူပြုထားသောရွေးစရာများအားလုံးကိုသာသွားရန်လိုအပ်သည်။ iCloud တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များအပြင်ထပ်တူညှိထားသော (သို့) နောင်အနာဂတ်တွင်ပြုလုပ်မည့်ဓာတ်ပုံများအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် iCloud Drive ရှိစာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် \_ t iCloud တွင် iCloud Drive နှင့် Photos ဟုခေါ်သော Folder အသစ်နှစ်ခုရှိသော Quick Accesses သို့သွားသည်။
ကို C အတွက်Outlook နဲ့ sync heck ဒေတာ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်လွှာကိုဖွင့ ်၍ ဘယ်ဘက်ကော်လံသို့သွားပြီးအဆက်အသွယ်များမည်သို့ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း (iCloud Contacts group အတွင်းတွင်ရရှိနိုင်) ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ပြက္ခဒိန်များ (ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၌ရှိသည့်အရေအတွက်အတိုင်းပြလိမ့်မည်) ကိုသွားကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ iCloud တွင်ကျွန်ုပ်တို့တပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်များအားလုံးကဲ့သို့) ။
Internet Explorer နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ထားသော Safari အကြိုက်ဆုံးများကိုကြည့်လိုပါကဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပြီးအနှစ်သက်ဆုံးသို့သွားရပါမည်။ သော်လည်း Internet Explorer သည် Windows 10 တွင်ပုံမှန် browser မဟုတ်တော့ပါ Microsoft Edge အတွက် Apple သည် veteran browser သို့ bookmark များကိုဆက်လက်တင်သွင်းသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Microsoft Edge ကနေ Bookmarks တွေကိုမြန်မြန်တင်သွင်းနိုင်တယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ထုတ်ကုန်များ၏ Bookmarks များကိုအမြဲတမ်းမွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအခါအားလျော်စွာဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ကလုပ်ဖို့နှစ်ခုနှိပ်သာကြာ, ဒါကြောင့်ဒါဟာအချိန်ကုန်ဖြစ်စဉ်ကိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iCloud » iCloud Windows အတွက်သိထားသင့်သမျှ
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၏ proxie နှင့်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားပြီး၊ မည်သည့်အတွေးအခေါ်ကိုမဆိုပြင်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Windows 10 တွင် iCloud ကိုအချိန်နှင့်အမျှ configure လုပ်ရန်လနှင့်ချီ။ ကြိုးစားခဲ့သည် ဖြစ်၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင် "အတည်ပြုအတည်ပြုကုဒ်" ဝင်းဒိုး၌နေပါ။ ငါဘယ်လောက်ပဲငါထားထားပါ၊ ငါဒီလိုဖြစ်လာတာငါပဲလား
အတည်ပြုကုဒ်ကိုဘယ်အချိန်မှာတောင်းပါသလဲ။ အကယ်၍ သင့်အားမေးလျှင်၎င်းသည်သင့်အားအချက်နှစ်ချက်စစ်ဆေးခြင်းကိုသက်ဝင်စေပြီး၎င်းသည်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုသင်၏အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ဤကိစ္စတွင် Windows အတွက် iCloud အတွက်၎င်းနှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစက်သို့သတင်းပို့လိမ့်မည်။ ရိုက်ထည့်ပါ
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါငါလုပ်တာပါ ကျွန်ုပ်၏အခြားစက်ပစ္စည်းများသို့ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိသောကုဒ်ကိုကျွန်ုပ် ၀ င်းဒိုးထဲမှ "တင်" ခြင်းသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါကအဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ငါနောက်မှကြိုးစားကြည့်ပါ ဘယ်ကိစ္စမဆို။ iCloud ကိုဖြုတ်ပြီး၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြန်မြင်တွေ့ပါ။
ငါနေဆဲတူညီတဲ့ပြproblemနာရှိသည်။ ငါရွေးချယ်စရာများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီးရလဒ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ iCloud ကို uninstall လုပ်ရန်၊ ထပ်မံဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် (iCloud 6.2.1.67) ကို install လုပ်ရန်၊ restart လုပ်ရန်၊ configure လုပ်ရန်နှင့်အဆုံးမဲ့တင်ရန်အတွက်ယခုငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။
Windows 10 ကို update လုပ်ပြီးကတည်းကငါလပေါင်းများစွာနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ iPhone, iPad နှင့် MacBook Pro တို့တွင်ပြproblemsနာမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ Windows PC မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင်ဓာတ်ပုံ ၂၀၀၀ သိမ်းဆည်းထားသည်။ အမှားမှားဖြင့်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ယခုသူတို့ဓာတ်ပုံ ၆၀၀၀ နီးပါးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။ ငါ downloads ကိုဖျက်သိမ်းသည်။ ငါ session ကိုပိတ်ပြီးပြီ၊ configuration ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဒေါင်းလုပ်
ငါဓာတ်ပုံရွေးစရာများကဏ္ enter ထဲသို့ဝင်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်သည် iCloud တွင်ဓါတ်ပုံများနှင့်မျှဝေထားသောအယ်လ်ဘမ်များသာရှိသောကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာများအားလုံးပျောက်နေသည်။
ကောင်းသောနံနက်ခင်း Adrian, "Photos in iCloud" အကွက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုလုပ်နိုင်သည်။ လေးစားပါတယ် !!!
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း iCloud နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြံအစည်မှာမည်သည့်ထုတ်ကုန်မှမဆို၎င်းတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် iCloud အကောင့် (Apple နှင့် Windows စက်များနှင့်) ဖိုင်နှစ်ခုကိုမျှဝေရန်ဖြစ်သည်။
ပြproblemနာကအက်ပလီကေးရှင်းများအကြားမျှဝေထားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်အပြည့်အဝမျှဝေခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် Windows အတွက် iCloud နှင့်မတူပါ။ iCloud အကောင့်တစ်ခုမှထုတ်လုပ်ထားသောဖိုင်တွဲများနှင့်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာများ (Windows နှင့် Mac) မှတူညီသောအကောင့် (Windows နှင့် Mac) တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်မျှဝေသောအခါ၎င်းတို့သည် Apple ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ Windows Device များရှိအခြား iCloud အကောင့်တစ်ခုမှမျှဝေထားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ အနာဂတ်မွမ်းမံမှုများတွင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်း iCloud ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအထောက်အကူပြုမလား၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်သည့်အခြား cloud service သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ကျွန်ုပ်ကူညီမလားဆိုတာကြည့်ရပါလိမ့်မည်။
Apple က Workflow ကိုတင်တယ်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် iOS ဝေစုသည်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကအဆိုးရွားဆုံးသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်